पुस्तकसँगै हुर्कौं- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
आज अन्तर्राष्ट्रिय बालपुस्तक दिवस
चैत्र २०, २०७३ अनन्त वाग्ले
हरेक वर्षको ‘अप्रिल फुल’ बारे सबैजसो जानकार छन् । यस दिन मानिसलाई झुक्याउँदै र उटपटयाङ गर्दै नरमाउने कमै होलान् । तर यसको भोलिपल्ट अप्रिल २ मा पर्ने महत्त्वपूर्ण दिवसबारे कमैलाई थाहा होला । यो दिन अन्तर्राष्ट्रिय बालपुस्तक दिवस हो । सन् १९६७ देखि यो दिवस संसारभर नै विविध कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिएको छ । केही वर्ष यतादेखि नेपालमा पनि मनाउन थालिएको छ ।
बालसाहित्यको विकासमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आईबीबीवाईमा आवद्ध विश्वका ८० भन्दा बढी देशमा यो दिवस विशेष रूपमा मनाइन्छ । ती ८० मध्येका कुनै न कुनै देशले बर्सेनि यो दिवसका लागि नारा तथा विशेष लोगो तय गर्छन् । अनि विशेष सन्देशसाथ संसारभर त्यसको प्रचार गर्छन् । बालबालिकालाई कथा सुनाउँछन् । नयाँ पुस्तक उपहार दिन्छन् । नयाँ किताब सार्वजनिक गर्छन् । पुस्तक मेला गरिन्छ । बालबालिका पनि आफूले पढेका पुस्तकबारे छलफल गर्छन् । यस वर्ष रूसले यो दिवसको संयोजन गरिरहेको छ । यस वर्षको बालपुस्तक दिवसको नारा ‘पुस्तकसँगै हुर्कौं’ रहेको छ । बालपुस्तक दिवस अप्रिल २ मा मनाउनुको खास कारण पनि छ । यस दिन विश्व विख्यात परिकथाकार हान्स क्रिस्चियन एन्डर्सनको जन्मदिन पनि हो । १ सय ५० भन्दा बढी भाषाहरूमा अनुदित एन्डर्सनका कथा संसारमै सर्वाधिक बालबालिका र पाकाहरूबाट समेत पढिन्छन् । कुरूप टिउरो (अग्ली डक्लिङ), बादशाहको नयाँ लुगा (इम्पेरर्स न्यु क्लथ), राजकुमारी र केराउको गेडा (दि प्रिन्सेस एन्ड दि पिच), सानी जलपरी (लिटिल मर्मेड) र सलाई बेच्ने केटी (दि म्याचेच गर्ल) एन्डर्सनकृत १ सय ७० कथामध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय मानिन्छन् । उनका बाबु घरघरमा जुत्ता सिउँदै हिँड्थे । उनी ११ वर्षको हुँदा बाबुको मृत्यु भएपछि आमाले दोस्रो विवाह गरिन् । यसरी बेसहारा बनेका एन्डर्सन लेखनप्रतिको उत्कट चाहनाले संसारभर प्रसिद्ध भए । उनको देश डेनमार्कमा मात्र होइन, संसारभरि नै उनलाई अत्यन्त श्रद्धा गरिन्छ ।
सानो उमेरमा बालबालिकाले जति धेरै किताब पढे, उनीहरूको भाषा त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ । जसको भाषा राम्रो छ, उसले अध्ययन, रोजगारलगायत हरेक क्षेत्रमा सफलता र अवसर पाउँछ । भाषामा राम्रो भएका बालबालिकाको अरू सबै विषयमा पनि रम्रो नतिजा पाइन्छ । यी सबै तथ्य अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका कुरा हुन् ।
हिजोआज रेडियो, टीभी, कम्प्युटर, मोबाइलजस्ता माध्यमका कारण किताबको महत्त्व घट्दै गएको पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । तर सूचना र सञ्चार प्रविधिमा जतिसुकै विकास भए पनि किताबको बेग्लै महत्त्व छ । यसको प्रभावकारिता घट्ने सम्भावना कमै छ । पुस्तकप्रेमी र असल पाठकहरू भन्छन्– किताबको स्वाद अरू कुनै माध्यमबाट पनि पाइँदैन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बालपुस्तक दिवसको सन्दर्भमा पनि हामी पनि किताब संस्कृतिमा रमाउन सिकौं है । यही दिवसका सन्दर्भमा रूसी लेखक सर्जेयी माखोतिनले दिएको सन्देश यस्तो छ–‘बालककालमा म ब्लक र साना खेलौना जोडजाड गरेर घर बनाउँथे । अनि छानाको ठाउँमा चित्रमय बालपुस्तक राख्थेँ । सपनीमा म घरमाथि चढ्थेँ । सलाईको बट्टाले बनाएको ओछयानमा पल्टन्थेँ ।
अनि तारा चम्चमाइरहेको आकाश र बादल नियाल्थेँ । यो सबै मलाई मन परेको तस्बिरमा आधारित हुन्थ्यो । म अन्तरआत्मादेखि नै बालकमा जीवनको नियम पछयाउँछु, जो सुरक्षित र शान्त वातावरण चाहन्छन् । यसमा बालपुस्तकले साँच्चै मलाई सघाउँछन् ।
म हुर्किएँ । पढ्न सिकेँ । मेरो कल्पनामा किताब घरको छानाभन्दा भिन्न भयो । यो पुतली या चराझैं देखिन थाल्यो । किताबका पाना पखेटाझैं लाग्न थाले, जसले सुकेका पातकोजस्तै धुन निकाल्छ । झयालमा रहेको किताबले वेगका साथ झयाल खोल्दै अज्ञात शून्यतालाई चिर्न खोजेझैं देख्छु । म त्यसलाई हातमा लिन्छु र पढ्न थाल्छु, अनि त्यो शान्त हुन्छ । अनि म अर्कै संसारमा बत्तिन्छु, जहाँ कल्पनाको संसार फैलन थाल्छ ।
आहा ! कसैको हातमा नयाँ किताब देख्नुमा कत्ति मज्जा छ, त्यो केको बारेमा होला भनेर उर्लिने जिज्ञासा ख्याल रमाइलो हुन्न । तिमी त्यसको अन्तिम पृष्ठ हेर्न लोभिन्छौ । आहा ! त्यसमा क्या वासना आउँछ, जसलाई छपाइको मसी र गममा भाग लाउन सकिँदैन । त्यो किताबको आफ्नै सुवास हो, जो आफैँमा उत्तेजक र अनुपम हुन्छ । केही पृष्ठको वासना लिइसक्दा पनि किताब ब्युँझेको हुन्न । जब तिमी पढ्न थाल्छौ, बल्ल त्यो ब्युँझिन्छ ।
तिमी बढिरहेका छौ । संसार झन्झन् जटिल बन्दै छ । तिमीले अनेकौं प्रश्न सामना गरिरहेका छौ, जसको जवाफ दिन वयस्कहरू पनि तयार छैनन् । तैपनि तिमीले शंका र रहस्यहरू सुनाउनु महत्त्वपूर्ण छ । यस्तो बेला किताब तिमीलाई सघाउन आउँछ । हामीलाई लाग्छ : यो किताब मेरै बारेमा लेखिएको होला । र, मन पर्ने पात्रले एक्कासि तिमीले जस्तै चिच्याउँछ । उसले पनि उस्तै समस्या भोग्छ र आफूलाई आफ्नै बान्की दिन्छ । र, अर्को पात्र सधैं तिमीजस्तो हुन्न तर तिमी उसलाई आफ्नो आदर्शको रूपमा चाहन्छौ । अनि ऊजस्तै बहादुर र सम्पन्न हुने चाह गर्छौ ।
जब कुनै बालक या बालिकाले भन्छन् कि ‘मलाई पढ्न मन लाग्दैन’ त्यसले मलाई हाँसो लाग्छ । मलाई ती बालबालिका हुन् भन्नेमा शंका लाग्छ । उनीहरू आइसक्रिम खान्छन्, खेल्छन् र रमाइला सिनेमा हेर्छन् । अर्को किसिमले भन्दा उनीहरू रमाइलो मन पराउँछन् । खासमा पढाइ भावना र व्यक्तित्व विकासको कडा काम मात्र होइन, सबैभन्दा पहिला त यो महान् आनन्द हो ।’
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७३ १०:२१
फाल्गुन १५, २०७३ अनन्त वाग्ले
हाम्रा रुचि फरकफरक हुन्छन् । कसैलाई विज्ञानका कुरामा चाख हुन्छ । कसैलाई संगीत, कलामा । कसैलाई साहित्यमा । जुन विधामा रुचि भए पनि त्यसबारे धेरैभन्दा धेरै जानकारी चाहिन्छ । यसका लागि पढाइ पहिलो स्रोत हो । अनि पढाइको माध्यम हो किताब । हामीले चाहेका सबै किताब हामीसँग हुँदैनन् । यसका लागि पुस्तकालय हाम्रो भरपर्दो साथी हुन सक्छ ।
पुस्तकालय भनेको किताब घर (पुस्तक–आलय) हो । अर्थात् पुस्तक संग्रह गर्ने घर । तर पुस्तकालयमा पुस्तक थुपार्ने काम मात्र हुँदैन । यहाँ पढ्ने सुविधा हुन्छ । पुस्तक लान पनि सकिन्छ । यहाँ पुस्तकको संरक्षण गरिन्छ । मिलाएर राखिन्छ । पुस्तक मात्र होइन पत्रिका, पाण्डुलिपि र पढाइलाई सघाउने विभिन्न श्रव्यदृश्य सामग्री पनि यहाँ पाइन्छन् ।
बालबालिकाका लागि विद्यालयमा सबै विषयका किताब पढाइन्छ । तर कोर्सका किताब मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले हामीले कोर्सबाहिरका किताब धेरैभन्दा धेरै पढ्नु जरुरी छ । यसले हामीमा सिर्जनशीलता विकास हुन्छ । भाषाको ज्ञान बढ्छ । खोजी तथा अनुसन्धान कला सिकिन्छ । विभिन्न सीप जानिन्छ । अभिव्यक्ति कलामा परिष्कार आउँछ । कोर्सको पढाइमा टेवा पुग्छ । सानैदेखि पढ्ने बानी बसाल्दा ठूलो कक्षाका साथै आफ्नो करिअरमा पनि राम्रो गर्न सक्छौं ।
पुस्तकालय हाम्रो अभिन्न साथी हो । पुस्तकालयमा हामी हाम्रो रुचिअनुसारका पुस्तक तथा श्रव्यदृश्य सामग्री पाउन सक्छौं । यसले हामीलाई हाम्रो क्षेत्रमा सफल हुन सघाउँछ । हामी आफ्नै स्कुलको पुस्तकालयबाट पनि विभिन्न किताब पढ्न सक्छौं । स्कुलमा पुस्तकालय छैन भने हामी किताब संग्रह गरेर पुस्तकालय खोल्न पनि सक्छौं ।
सहर तथा गाउँमा पनि कुनै ठाउँमा सार्वजनिक पुस्तकालय पनि हुन्छन् । बिहान–बेलुका वा बिदाको समयमा हामी यस्ता पुस्तकालयमा पनि जान सक्छौं । राम्रा पुस्तकालयमा बेग्लै बाल शाखा या चिल्ड्रेन कर्नर पनि बनाइएको हुन्छ । ललितपुरको पुल्चोकमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय छ । ९५ हजारभन्दा बढी पुस्तक रहेको यो पुस्तकालय ६० वर्षअघि स्थापना भएको हो । सुरुमा राजगुरु हेमराज पाण्डेको निजी पुस्तकालय किनेर राष्ट्रिय पुस्तकालयको सुरुगरिएको थियो । राष्ट्रिय पुस्तकालयमा २२ वर्षअघिदेखि बाल शाखा पनि सञ्चालनमा छ । यहाँ ९ हजार ५ सय बालपुस्तक छन् । तर २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पुस्तकालय भवन भत्किएपछि धेरै किताब पुरिएका छन् । भएका किताब पनि बिग्रिएका छन् । भूकम्पपछि बेग्लै बाल शाखा चलाउन नसकिएको पुस्तकालय अधिकृत प्रेमराज अधिकारी बताउँछन् ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा रहेको काठमाडौं सार्वजनिक पुस्तकालयमा पनि चिल्ड्रेन कर्नरको व्यवस्था छ । २ हजारभन्दा बढी बालपुस्तक रहेको यस पुस्तकालयको सदस्य बनेपछि १५ दिनमा ४ वटा पुस्तक घरमै लगेर पढ्न पाइन्छ । पुस्तकालयमा पनि पढ्न सकिन्छ । यहाँ हरेक शनिबार कथावाचन पनि गरिन्थ्यो । भूकम्पपछि यहाँको कथा वाचन पनि रोकिएको पुस्तकालय व्यवस्थापक जुजुभाइ डंगोलले बताए ।
काठमाडौंको लैनचौरमा नेपाल–जापान बाल पुस्तकालय रहेको छ । यहाँ १० हजार बालपुस्तक छन् । जापानको जोहो रोरेन कम्पनीको सहयोगमा यसको स्थापना भएको हो । यो कम्पनी २ लाख ७० हजारभन्दा बढी सदस्य भएको औद्योगिक युनियन हो । ओसाका अन्तर्राष्ट्रिय क्लब तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यसको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् । नेपाल–जापान बाल पुस्तकालयमा हरेक हप्ता कथावाचन, चित्रकला लगायत विभिन्न बाल प्रतियोगिताहरू पनि आयोजना गरिन्छ । यसैगरी पाल्पाको तानसेनमा पढ्ने दलान हुँदै विकास भएको धवल पुस्तकालयमा पनि सञ्चारकर्मी एवं लेखक विनय कसजूको सक्रियतामा बाल शाखा स्थापित छ । देशका विभिन्न भागमा रहेका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूमा पनि बालबालिकाका लागि बेग्लै कक्ष स्थापना हुनु आवश्यक छ ।
पहिले पहिले मठमन्दिर, गुम्बा तथा विहारहरूमा धार्मिक तथा आध्यात्मिक अध्ययनका लागि पुस्तकालय चलाइन्थ्यो । विस्तारै टोलबस्ती, विद्यालय तथा ठूला कम्पनी तथा कार्यालयहरूमा पनि पुस्तकालय राख्न थालियो । यसबाट पुस्तकालय मानिसको ज्ञान, सीप तथा सूचना प्रवाहको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित भएको छ । जुन देश जति धनी छ, त्यहाँ त्यति नै धेरै पुस्तकालयको विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले पुस्तकालय मानव सभ्यता, कला संस्कृति एवं विज्ञान प्रविधिको आधार पनि हो ।
हामीले पनि आफूलाई मन परेका किताब संग्रह गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । यसरी पुस्तक जम्मा गर्दै जाँदा केही वर्षमा हामी आफैं आफ्नो घर, कोठामा निजी पुस्तकालय स्थापन गर्न सक्छौं । यसबाट हामीलाई जुनसुकै बेला मन परेका अध्ययन सामग्रीको आनन्द लिन सहज हुन्छ । वास्तवमा पुस्तक पढ्नुको बेग्लै रमाइलो छ । हरेक सफल र असल मानिस कुनै न कुनै तरिकाले पुस्तकको प्रेममा परेका हुन्छन् । हामी पनि पुस्तकमा रमाउन, पुस्तकालय धाउन र पुस्तकालयको विकास गर्न आफैं लागि परौं ।
प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७३ १०:२४